စော်ကားခြင်းနှင့်စော်ကားသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on March 17, 2009 March 20, 2009 by kyawkyawoo	Posted in စော်ကားခြင်းTagged စာရေးသူနဲ့ရည်ရွယ်ချက်, နစ်နာရာနစ်နာကြောင်း, ပစ်စာ, ဘာသာရေးနှင့်အင်တာနက်, စော်ကားခြင်း, စော်ကားခြင်းနှင့်စော်ကားသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, မြန်မာဘလော့ဂ, မြန်မာဘလော့ဂါ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, chinese muslims, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Myanmar Muslims, religion
မြန်မာဘလော့ဂါအတော်များများဟာ Pen Name ကလောင်အမည်နဲ့ရေးကြပါတယ်။ရေးသားသူအများဟာကိုယ့်အချိန်အကုန်ခံပြီး မတရားမှူတွေကိုအမှန်အတိုင်းတင်ပြကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးပြလို့နစ်နာသူတွေဟာမတရားလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ရေးသူတွေဟာအမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်တဲ့သူတွေဆိုပြီး လူအများလေးစားမှူကိုရပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးရင်
ပစ်စာအသွင် ဆောင်တဲ့ အမည်နာမ မဖော်ပြတဲ့စာရေးသူတွေဟာစာဖတ်သူ
ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းလေးစားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုလူမျိုးကိုကလောင်ပုန်းနဲ့စော်ကားရင် ပစ်စာနဲ့စော်ကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရတဲ့သူတိုင်းရင်ထဲမှာမချိအောင်
ကိုယ်တွေးမိတာကအင်တာနက်ရဲ့လွတ်လပ်မှူကိုယူပြီးတာဝန်မဲ့ ပစ်စာဆန်ဆန်ဘလော့ရေးးတဲ့သူတွေများလာတာကို သတိပြုမိလို့ပါ။
အရေးဖြစ်ပါတယ်။နတ်ကိုးကွယ်သည် ဖြစ်စေ သစ်ပင်ကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ
ဒီလူသားရဲ့ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ကို ယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးကြီးတိုင်းလေးစားနားလည်ကြပါတယ်။
မိမိမယုံကြည်တဲ့ဘာသာကို စော်ကားတဲ့သူဟာ သူယုံကြည်တဲ့ဘာသာအဆုံးအမ
အကယ်၍ အခြားဘာသာတစ်ခုကိုစော်ကားခြင်းသည် ဒီလောကရဲ့လောကီလောဘ
အကြောင်းမရှိပါ။တုံ့ပြန်စရာလဲမရှိပါ။ Islam ဘာသာရဲ့သင်ကြားချက်မှာ
ဝင်တို့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိယန်ဘာသာဝင်တို့က Islam ဘာသာဝင်တို့ကို
သည့်အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်က Islam ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်
7 thoughts on “စော်ကားခြင်းနှင့်စော်ကားသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး”
Doa @ tootoolayy says:
ဒီပိုစ့်တော့ အရမ်းကြိုက်သွားပြီ။ ပညာရှိ ပီသပါပေတယ်။
I like it very much. Thank you so much for your valuable work. Appreciated. Please allow me to copy it.
Mg Salafi says:
ဒါပေါ့ အစ်ကို။ ဘာသာတိုင်းဟာ ကောင်းရာကို ညွှန်ပြ၊ ယဉ်ကျေးဖို့ကို လမ်းညွှန်ဆုံးမထားတာချည်းပါပဲ။
သူများကို ညစ်ညမ်းစွာ စော်ကားပြောဆိုတာဟာ ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သလို ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုလည်း ဖော်ညွှန်းရာရောက်ပါတယ်။ ရန်ကို ရန်ချင်းမတုံ့ပြန်ပဲ လျစ်လျူရှူပြီး မေတ္တာပို့ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူသားအချင်းချင်း လေးစားနားလည်မှူလေးရှိရင် အရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းအေးမြသွားမှာ သေချာပါတယ်။
Comment အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ Post အသစ်တင်ရင်လဲ
လာဖတ်ပြီးအကြံပေး တဲ့comment တွေရေးပါအုန်းလို့…
u ko latt says:
Neil Armstrong; Does his faith important for the Muslims?
Prophet’s Birthday in Yangon, Myanmar